ဟဒီးဆ်: အသင်တို့သည် အာယသ်တော်တစ်ခုမျှပင်ဖြစ်စေ ငါကိုယ်တော်ထံမှ ကြားသိခဲ့ရသည်တို့ကို ပို့ချကြပါ။ အစ္စရာအီလ်မျိုးနွယ်ထံမှ ကြားသိရသည်တို့ကိုလည်း ဆင့်ပြန်ပြောကြလေကုန် (ထိုသို့ပြောကြားခြင်းသည်) အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပေ။ ထို့ပြင် အကြင်သူသည် ငါကိုယ်တော့်အပေါ် သိလျက်နှင့်တမင်လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့လျှင် ၎င်းသည် သူနေထိုင်ရမည့်နေရာအား ငရဲမီးတွင် သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အသင်တို့သည် အာယသ်တော်တစ်ခုမျှပင်ဖြစ်စေ ငါကိုယ်တော်ထံမှ ကြားသိခဲ့ရသည်တို့ကို ပို့ချကြပါ။ အစ္စရာအီလ်မျိုးနွယ်ထံမှ ကြားသိရသည်တို့ကိုလည်း ဆင့်ပြန်ပြောကြလေကုန် (ထိုသို့ပြောကြားခြင်းသည်) အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပေ။ ထို့ပြင် အကြင်သူသည် ငါကိုယ်တော့်အပေါ် သိလျက်နှင့်တမင်လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့လျှင် ၎င်းသည် သူနေထိုင်ရမည့်နေရာအား ငရဲမီးတွင် သတ်မှတ်လိုက်ပါ။
အမျိုးအစား: ဟဒီးဆ်တော်နှင့် ၎င်း၏ပညာရပ်များ။ . စွန္နဟ်ဆိုင်ရာ အထွေထွေလေ့လာမှုများ။ . စွန္နဟ်၏အရေးပါမှုနှင့် ၎င်း၏ အဆင့်အတန်း။ .
အဗ်ဒုလ္လာဟ်ဗင်န်အမ်ရ်ဗင်န်အာဆ်ွ (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်တော်ကြားတော်မူသည်။ အသင်တို့သည် အာယသ်တော်တစ်ခုမျှပင်ဖြစ်စေ ငါကိုယ်တော်ထံမှ ကြားသိခဲ့ရသည်တို့ကို ပို့ချကြပါ။ အစ္စရာအီလ်မျိုးနွယ်ထံမှကြားသိရသည်တို့ကိုလည်း ဆင့်ပြန်ပြောကြလေကုန် (ထိုသို့ပြောကြားခြင်းသည်) အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပေ။ ထို့ပြင် အကြင်သူသည် ငါကိုယ်တော့်အပေါ် သိလျက်နှင့်တမင်လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့လျှင် ၎င်းသည် သူနေထိုင်ရမည့်နေရာအား ငရဲမီးတွင် သတ်မှတ်လိုက်ပါ။
ဟဒီးဆ်၏အလိုသဘောမှာ သင်တို့သည် ငါကိုယ်တော့်ထံမှ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် သို့မဟုတ် စွန္နဟ်မှ အမွေဆက်ခံရရှိသောအသိပညာကို လူတို့အားပို့ချကြပါ။ အသင်တို့ပို့ချသည့်အရာသည် ကုရ်အာန်တစ်အာယသ်မျှလောက် အနည်းငယ်ပင်ဖြစ်စေ ပို့ချသူသည် ၎င်းအား ခိုင်မာတိကျစွာ သိနားလည်ရမည်ဟူသည့် စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ ပို့ချရမည်။ သာသနာအားပို့ချရန် (ဝါဂျိဗ်)တာဝန်ဖြစ်သည့် အမိန့်သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ် ထိုကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် အခြေအနေမျိုးတွင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းအပေါ်တွင် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းမခံရလျှင် ဥပမာ- တိုင်းပြည်တွင် အလ္လာဟ်ဘက်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်သူများရှိနေပြီး ထိုသူတို့က လူတို့အား သာသနာ့အသိပညာများနှင့် ၎င်းတို့၏ သာသနာရေးကိစ္စရပ်များကို နားလည်အောင် သင်ကြားပေးနေသည့် အခြေနေမျိုးတွင် ပို့ချရန် (ဝါဂျိဗ်)တာဝန်မဟုတ်ပေ။ ထိုအခြေနေမျိုးတွင် ပို့ချခြင်းသည် (မုတ်စ်သဟဗ်) သာဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဗနီအစ္စရာအီလ်တို့ထံမှ ၎င်းတို့တွင်ဖြစ်ခဲ့သော မှန်ကန်သည့် အဖြစ်အပျက်များ ဥပမာ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကို ဝါးမျိုလောင်ကျွမ်းသွားရန် မိုးကေားင်ကင်မှ မီးကျလာခြင်း၊ နွားငယ်ကို ကိုးကွယ်မှုမှ သောင်ဗဟ် အမှားဝန်ချမှုပြုရန်အတွက် အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် တင်ပြထားသော သင်ခန်းစာယူရန်နှင့် တရားရရန် အဖြစ်အပျက်တို့အား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း စသည်တို့အား ၎င်းတို့ထံမှ ပြန်လည်ဆင့်ပြန်ခြင်းသည် အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမဟုတ်ပေ။ ထို့နောက် အကြင်သူသည် ငါတမန်တော်အပေါ်တွင် လိမ်လည်စွပ်စွဲပြောဆိုမည်ဆိုလျှင် ၎င်းသည် မိမိနေထိုင်ရမည့်နေရာကို ငရဲမီးတွင် သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အပေါ်တွင် လိမ်လည်ခြင်းသည် အခြားသူတို့အပေါ် လိမ်လည်ခြင်းနှင့် မတူပေ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အပေါ် လိမ်လည်ခြင်းသည် အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပေါ် လိမ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် ၎င်းသည် (ရှရီအဟ်)တရားတော်အပေါ် လိမ်လည်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အသိပေးမိန့်ကြားတော်မူသော အရာတိုင်းသည် (ဝဟီ)ဗျာဒိတ်တော်အနက်မှပင်ဖြစ်ပြီး ထိုဗျာဒိတ်တော်သည် ကြီးကျယ်မြင့်မားတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်အနက်မှဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းအားလိမ်လည်ပြောဆိုသူ၏ ပြစ်ဒဏ်သည် အပြင်းထန်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်ပင်ဖြစ်မည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ (ရှရီအဟ်) တရားဥပဒေအား ပို့ချရန် တာဝန်ရှိသည်။ လူတစ်ဦးသည် အနည်းငယ်မျှပင်ဖြစ်စေ မိမိကျက်မှတ် သဘောပေါက်နားလည်ထားသည့်အရာအား ပို့ချရမည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ (ရှရီအဟ်) တရားဥပဒေကို ပို့ချနိုင်ရန်အတွက် ပညာရှာဖွေဆည်းပူးခြင်းသည် အရေးကြီးတာဝန်တရပ်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ပညာရှာဆည်းပူးခြင်းသည် (ဖရဿ်ွကိဖါယဟ်)ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မွတ်စ်လင်မ်အချို့က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လိုက်လျှင် ကျန်ရှိသူအားလုံး တာဝန်ကျေသွားပေမည်။ အကယ်၍ ၎င်းတာဝန်အား တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိလျှင် မွတ်စ်လင်မ်အားလုံး အပြစ်ထိုက်မည်ဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာယူရန်နှင့် တရားရရန်အတွက် အစ္စရာအီလ်လူမျိုးနွယ်စုတို့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာတို့အား အောက်ပါစည်းကမ်းချက်တို့နှင့်အညီ တင်ပြပြောဆိုခွင့်ရှိသည်။ ၁။ မမှန်ကန်သည့်ဆင့်ပြန်ချက်မဖြစ်ရပေ။ ၂။ မှန်ကန်သည့် ဆင့်ပြန်ချက်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး လေ့လာရှာဖွေရမည်။ ၃။ အစ္စလာမ့်တရားလမ်းစဉ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ရမည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အပေါ် လိမ်လည်ခြင်းကို တားမြစ်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် ကြီးလေးသော အပြစ်အကုသိုလ်များအနက်မှ ဖြစ်သည်။
စကားပြောရာတွင် လိမ်လည်မှု၌ မကျရောက်စေရန်အတွက် ဆင်ခြင်ရန်နှင့် မှန်ကန်စွာပြောဆိုရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ အထူးသဖြင့် အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တရားဥပဒေပြဌာန်းချက်တွင် အမှန်တရားကိုသာပြောဆိုရမည်။ ထိုသို့ပြောဆိုရန် မှန်ကန်ပြီး တိကျခိုင်မာသည့် အသိပညာရှိရန် လိုအပ်သည်။
ဟဒီးဆ်တော်နှင့် ၎င်း၏ပညာရပ်များ။ . စွန္နဟ်ဆိုင်ရာ အထွေထွေလေ့လာမှုများ။ . စွန္နဟ်၏အရေးပါမှုနှင့် ၎င်း၏ အဆင့်အတန်း။ .
ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ပညတ်ချက်။ .
ဧကန်မုချ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် တားမြစ်ထားသော အရာသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် တားမြစ်ထားသောအရာနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။